Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna: Ihe Ise Baịbụl Kwuru
Teta! | Mee 2013
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna
E nwere otu nwoke Saụt Afrịka aha ya bụ Michael. * Ọ na-emere nwa ya nwoke dị afọ iri na itoolu ihe niile nna kwesịrị imere nwa ya. Ma, isi anọghị nwa ahụ n’ụlọ. Ọ na-abụ nwoke a cheta ya, ya adị ya ka ò nwere ihe o kwesịrị ime nke ọ na-emeghị.
Ma, o nwere nwoke ọzọ aha ya bụ Terry. O bi na Spen. Obi na-atọ ya ụtọ mgbe ọ bụla o chetara nwa ya nwoke aha ya bụ Andrew. Nwa ya nwoke ahụ kwuru, sị: “Mgbe m dị obere, papa m na-agụrụ m akwụkwọ, mụ na ya na-egwukarịkwa egwu. Ọ na-akpọkwa m aga ebe naanị mụ na ya ga-anọ. Otú o si akụziri m ihe na-atọ m ụtọ.”
Nke bụ́ eziokwu bụ na ịbụ ezigbo nna adịghị mfe. Ma, o nwere ihe ụfọdụ nwere ike inyere mmadụ aka ịbụ ezigbo nna. Ọtụtụ ndị nna achọpụtala na ime ihe Baịbụl kwuru na-abara ma hanwa ma ezinụlọ ha uru. Ka anyị tụlee ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru, ndị ga-enyere ndị nna aka.
1. Gị na Ụmụ Gị Na-anọ
Olee otú i si eme ka ụmụ gị ghọta na ị hụrụ ha n’anya? Anyị ma na ị na-emere ụmụ gị ọtụtụ ihe. Dị ka ihe atụ, ị na-agba mbọ akpata ihe ha ga-eri, hụkwa na e nwere ụlọ ha bi. Ị gaghị emere ha ihe ndị a ma ọ bụrụ na ị hụghị ha n’anya. Ma, ọ bụrụ na ị naghị ewepụta oge hiri nne gị na ha ana-anọ, ha nwere ike ịna-eche na ị hụrụ ọrụ gị, ndị enyi gị, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ n’anya karịa ha.
Olee mgbe nna kwesịrị ibido wepụtawa oge ka ya na ụmụ ya na-anọ? Nne na nwa ya na-ebido dịwa ná mma mgbe nwa ahụ ka nọ n’afọ. Nwa e bu n’afọ ruo izu isii, o nwere ike malite nụwa ihe. Ya na nna ya nwekwara ike ịmalite mgbe ahụ dịwa ná mma. O nwere ike ịna-egere otú obi nwa ahụ si akụ, na otú o si na-emegharị ahụ́. O nwekwara ike ịgwa ya okwu ma ọ bụkwanụ na-agụrụ ya egwú.
Ihe Baịbụl Kwuru: N’oge ụmụ Izrel, ọ bụ ndị nwoke na-akụziri ụmụ ha ihe. A gwara ha ka ha na ụmụ ha na-anọ. Diuterọnọmi 6:6, 7 gosiri na nke a bụ eziokwu. Ebe ahụ sịrị: “Okwu ndị a m na-enye gị n’iwu taa ga-adị n’obi gị; kụnye ha n’ime ụmụ gị, kwuokwa okwu banyere ha mgbe ị nọ ọdụ n’ụlọ gị na mgbe ị na-eje ije n’okporo ụzọ na mgbe i dina ala nakwa mgbe i biliri ọtọ.”
2. Ezigbo Nna Na-ege Ntị Mgbe Ụmụ Ya Na-agwa Ya Okwu
Meda obi gee nwa gị ntị ma ọ na-agwa gị okwu. Abachikwala ya ọnụ
Ị chọọ ka ụmụ gị na-akọrọ gị obi ha, i kwesịrị ịna-ege ntị ma ha na-agwa gị okwu. O kwesịghị ịbụ ha na-akọrọ gị ihe ụfọdụ, iwe abịa gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye iwe ọkụ, ya bụrụkwa na ọ naghị ara ahụ́ gị abawara ụmụ gị mba, ọ ga na-esiri ha ike ịkọrọ gị obi ha. Ma, ọ bụrụ na ị na-emeda obi na-ege ha ntị, ha ga-aghọta na ị hụrụ ha n’anya n’eziokwu. O nweghịkwa ihe ha na-agaghị na-akọrọ gị.
Ihe Baịbụl Kwuru: Ihe Baịbụl kwuru na-enyere anyị aka ime ihe ọ bụla anyị na-eme kwa ụbọchị. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru, sị: “Onye ọ bụla aghaghị ịbụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.” (Jems 1:19) Ndị nna na-eme ihe a Baịbụl kwuru na ụmụ ha na-akparịta ụka nke ọma.
3. Na-aja Ụmụ Gị Mma, Ejikwala Iwe Agwa Ha Okwu
Ị chọọ ịgwa ụmụ gị okwu ma ha mee ihe ọjọọ, gwa ha ya otú ga-eme ka ha ghọta na ị hụrụ ha n’anya nakwa na ị chọrọ ka ha baara onwe ha uru. Ihe anyị na-ekwu bụ na i kwesịrị igosi na ị hụrụ ha n’anya ma ị na-adụ ha ọdụ, ma ị na-agbazi ha, ma ị na-akụziri ha ihe, nakwa ma ị na-apịa ha ihe.
Ọ bụrụkwa na ị na-ajakarị ụmụ gị mma, ha ga-ege gị ntị mgbe ọ bụla ị na-adọ ha aka ná ntị. Ilu 25:11 kwuru, sị: “Dị ka mkpụrụ osisi apụl ọlaedo nke dị n’ime ihe e ji ọlaọcha tụọ, otú ahụ ka okwu e kwuru n’oge kwesịrị ya dị.” Ahụ́ na-aka eru ụmụaka ala ma ndị mụrụ ha na-aja ha mma. Ọ na-eme ka obi na-adị ha mma, na-emekwa ka ha na-agba mbọ na-akpakwu àgwà ọma.
Ihe Baịbụl Kwuru: “Unu ndị bụ́ nna, unu adịla na-akpasu ụmụ unu iwe, ka ha wee ghara ịda mbà n’obi.”—Ndị Kọlọsi 3:21.
4. Hụ Nwunye Gị n’Anya, Na-akwanyekwara Ya Ùgwù
Ụmụaka na-amụtakarị otú ọ bụla papa ha na-esi emeso mama ha ihe. O nwere ndị mụrụ gbasara otú ụmụaka si akpa àgwà. Ha kwuru, sị: “Otu n’ime ihe ọma ndị nna nwere ike imere ụmụ ha bụ ịkwanyere mama ha ùgwù. . . . Obi na-adị ụmụaka mma ma papa ha na mama ha na-akwanyere ibe ha ùgwù. Ha na-aghọtakwa na ha hụrụ ha n’anya.” *
Ihe Baịbụl Kwuru: “Ndị bụ́ di, na-ahụnụ nwunye unu n’anya, . . . ka onye ọ bụla n’ime unu hụ nwunye ya n’anya dị ka ọ hụrụ onwe ya n’anya.” —Ndị Efesọs 5:25, 33.
5. Na-eme Ihe Chineke Kwuru
Ọ bụrụ na nna hụrụ Chineke n’anya, ụmụ ya ga-amụta ya. Ha ga-ahụ Chineke n’anya, ha na ya adịrịkwa n’ezigbo mma.
O nwere otu Onyeàmà Jehova aha ya bụ Antonio. Ọ mụrụ ụmụ isii, gbaakwa mbọ zụọ ha nke ọma. Otu ụbọchị, nwa ya nwaanyị detaara ya akwụkwọ ozi. Ihe o kwuru n’akwụkwọ ozi ahụ bụ: “Ezigbo papa m. Ihe mere m ji detara gị akwụkwọ ozi a bụ ka m kelee gị maka otú i si zụọ m nke ọma. O meela ka m hụ ma Jehova ma onwe m ma ndị ọzọ n’anya. I mere ka m ghọta na ị hụrụ ma Jehova ma mụnwa n’anya. I meela n’otú i si jiri ọgbakọ Jehova kpọrọ ihe nakwa otú i si zụọ anyị otú Chineke chọrọ ka nna ọ bụla si zụọ ụmụ ya.”
Ihe Baịbụl Kwuru: “Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Okwu ndị a m na-enye gị n’iwu taa ga-adị n’obi gị.”—Diuterọnọmi 6:5, 6.
O doro anya na ọ bụghị naanị ihe ise a anyị kwuru okwu ha n’isiokwu a ka e ji ama ezigbo nna. Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe ọ sọkwara gị mee, o nweghị otú ị ga-esi meere ụmụ gị ihe niile ezigbo nna kwesịrị imere ụmụ ya. Ma, ị ga-abụ ezigbo nna ma ọ bụrụ na ị gbaa mbọ hụ ụmụ gị n’anya ma na-emere ha ihe ọ bụla ị ga-emeliri ha. *
^ para. 3 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
^ para. 19 Ọ bụrụgodị na nwoke agbaa nwunye ya alụkwaghịm, ụmụ ya ka ga na-asọpụrụ mama ha ma ọ bụrụ na papa ha na-akwanyere ya ùgwù. Ha na ya ka ga-adịkwa ná mma.
^ para. 25 Ị chọọ ịmatakwu otú ezinụlọ gị ga-esi dịrị n’udo, gaa n’Ịntanet gụọ akwụkwọ bụ́ Isi Ihe Na-akpata Obi Ụtọ Ezinụlọ. Adres ị ga-aga gụọ ya bụ www.jw.org.
Ezigbo Nna na Ụmụ Ya Na-anọ
O nwere otu nwoke Babadọs aha ya bụ Sylvan. Ya na nwunye ya na ụmụ ha nwoke atọ bi na Niu Yọk Siti. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ nọ na-anya ụgbọala. Ọrụ nwoke a anaghị enye ya ohere. Ọ na-anọ n’ụzọ site n’ehihie ruo n’ihe dị ka elekere anọ nke ụtụtụ. Ọ naghị arụ ọrụ na Tọzdee na Fraịde. Ma, ọ na-arụ ọrụ n’abalị Satọdee na n’abalị Sọnde. N’agbanyeghị nke a, ọ na-ewepụta oge ya na ụmụ ya ji anọ.
Nwoke ahụ kwuru, sị: “Ọ dịrịghị m mfe. Ma m na-agba mbọ wepụta oge mụ na onye nke ọ bụla n’ime ụmụ m ji anọ. Mụ na ọkpara m na-anọ n’ehihie Tọzdee ma ọ lọta akwụkwọ. Mụ na onye nke ọ tọrọ na-anọ na Fraịdee. Mụ na nke ọdụdụ na-anọkwa n’ụtụtụ Sọnde.”
Ihe Ụfọdụ Ndị Kwuru Gbasara Papa Ha
Sierra onye dị afọ ise kwuru, sị: “Mụ na papa m na-egwu egwu. Ọ na-agụkwara m akwụkwọ n’abalị.”
Michael onye dị afọ iri kwukwara, sị: “Mụ na papa m na-egwu egwu. Ọ na-abụ anyị gwukata egwu ya asị m, ‘Oge eruola ka anyị dozie ụlọ.’ Ọ na-abụkwa anyị rụkata ọrụ, ya asị m, ‘Ngwa ka anyị gwuo egwu.’”
Onye ọzọ kwuru gbasara papa ya bụ Andrew. Ọ dị iri afọ atọ na abụọ. O kwuru, sị: “Papa m anaghị ekwe ka ọrụ ma ọ bụ egwuregwu mee ka ọ ghara inyere mama m aka n’ụlọ. Ọ na-esi nri, na-asa efere, sorokwa na-edowe ụlọ anyị ọcha. Ọ hụrụ mama m n’anya, na-akwanyekwara ya ùgwù.”
Ihe Baịbụl kwuru enyerela ọtụtụ nde mmadụ aka ka ha na ezinụlọ ha na-ebi n’udo.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna
ISIOKWU TETA! A Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna
ISIOKWU TETA! A Otú Mmadụ Ga-esi Kwụsị Ịna-eti Nwunye Ya Ihe
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Di na Nwunye Ga-esi Kwụsị Ịna-agwa Ibe Ha Okwu Ọjọọ
IHE BAỊBỤL KWURU Ile Ndị Gba Ọtọ
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú I Kwesịrị Isi Na-agwa Nwa Gị Ihe Ọ Ga-eme na Ihe Ọ Na-agaghị Eme
Nke na-enweghị foto Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu TETA! Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna
TETA! Otú Mmadụ Ga-esi Bụrụ Ezigbo Nna